China 120w Gallium Nitride adapta ine akawanda plug (yemadziro & desktop) vagadziri uye vatengesi |Wellink
120w Gallium Nitride adapta ine akawanda plug (yemadziro & desktop)
Kupinza: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.5A MAx
Kubuda kumwe chete: Type-C1: 100w;Type-C2:100w;USB1:30w;USB2:30w.
Type- C1: 100wType- C2: 100wUSB1: 30w
Type- C1+Type- C 2: 60w+60wType- C1+USB 1: 87w+30wType- C1+USB 2: 87w+30w
Type- C2+USB 1: 87w+30w
Type- C2+USB 2: 87w+30w
Type- C1+ Type- C2+USB1: 60w+30w+30wType- C1+Type- C2+ USB2: 60w+30w+30w
Type- C1+Type-C2+USB1+USB2: 60w+30w+15w+15w
120w gallium nitride.Wall plug, desktop inogona kushandiswa.Multi-interface fast charge.Product features: overheating protection, overvoltage protection, four-port fast chargeging, battery protection, intelligent identification of matching voltage and current.Sei uchisarudza gallium nitride?
Gallium nitride rudzi rutsva rwe semiconductor zvinhu.Iyo ine hunhu hwehukuru hwakarambidzwa bhendi hupamhi, yakanyanya kupisa conductivity, yakakwirira tembiricha kuramba, nemwaranzi kuramba, corrosion resistance uye kuoma kwakanyanya.Uchishandisa gallium nitride zvikamu, charger haingoite diki muhukuru uye huremu huremu, asi zvakare ine mabhenefiti akawanda kupfuura akajairwa majaja maererano nekugadzirwa kwekupisa uye kutendeuka kwakanaka.
Ese maviri emhando-c maficha ari 100w nekukurumidza kuchaja, iyo inogona kuchaja iyo laptop.Ose maviri madoko e USB ane 30w nekukurumidza kuchaja, iyo inogona kuchinjirwa kune iphone uye Android mafoni.
foldable plug, iri nyore kutakura.
ADVANCED GAN TECHNOLOGY:Iyo ine yakakwirira yekupisa conductivity, yakakwirira tembiricha kuramba, nemwaranzi kuramba, asidhi uye alkali kuramba, simba rakakura uye kuoma kwesimba, izvo zvinoderedza saizi uye density yejaja.
INE SIMBA & INONYANYA KUCHAJA: Tora yakanyanya kunaka yekuchaja kuita neiyo yepamusoro GaN Technology.Iyo inovandudza zvinoshamisa yekuchaja kushanda kune inopfuura 90%.Iyi charger ine 1 x 65w USB C Port, 1 x 30w USB C port uye 2 x USB A ports.Iyo haingope anosvika makumi matanhatu neshanu simba rekumhanya kune yako USB-C zvishandiso asi zvakare inopa panguva imwe chete kuchaja kwemapiritsi ako uye smartphones pamwe nekuwedzera USB-A ports.
COMPACT SIZE:Chii chinoita kuti tekinoroji yeGaN ishamise ndechekuti inonatsiridza kuchaja uku ichidzikisawo saizi yejaja kusvika pa50% idiki pane yakajairwa charger.
KUFANIRA KWAKAKAWANDA: Inoenderana zvakanyanya neakawanda USB-C uye USB-A zvishandiso kubva kumafoni kusvika kumapiritsi kuenda kumalaptops, iPhone, iPad, Google Pixel, Samsung, LG uye nezvimwe!Izvi zvinoenderana neSamsung Galaxy S20+/Cherechedza 20 Ultra.Kuchaja nekukurumidza kunotsigirwa maPhones kana akashandiswa neiyo yekutanga Apple USB-C kune Mheni tambo.(Cherechedza: Iyi charger haisanganisire USB C kune Mheni Cable).
Protocol yakazara, tsigira zvese zvishandiso.Inoenderana nePD3.0, QC4+, QC3.0, SCP, FCP, AFC, MTK uye kumwe kumhanyisa kuchaja, nharembozha, mahwendefa, zvinopfekwa, chinja-chinja kuchaja
Anopfuura makore gumi zviitiko paOEM/ODM yeVatengi zvemagetsi indasitiri
Isu tinonyanya kutarisa maApples akateedzana uye ms akatevedzana zvigadzirwa.Zvese zvigadzirwa zvine dhizaini yedu yakasarudzika kuti ienderane nechigadzirwa.Nehunyanzvi hwekugadzira tekinoroji uye timu yehunyanzvi yekudzora mhando, Isu tinogona 'kuvimbisa huwandu hwemhando yezvigadzirwa
Unconditional Refund kana kutsiva furing iyo waranti nguva.
Isu tinogara tichiita zvese zvatinogona kuti mitengo irambe yakaderera sezvinobvira pasina kupira mhando uye isu tiri kugara tichiongorora nzira nyowani dzekushaikwa kwemhando.
Sample yemahara, kukurumidza kuburitsa, inoshanduka masevhisi yakananga fekitori kugovera, mutengo wemakwikwi, inodzorwa mhando
Mubvunzo: Ndingawana sei mamwe masampuli?
RE: kana iwe uchida kuyedza sampuli, Ese masampula anowanikwa mustock uye sampu ichatumirwa kuburikidza neDHL, Fedex, UPS, TNT nezvimwe mukati memazuva matatu.
Q: Ndeipi nguva yako yekubhadhara?
RE:Paypal , T / T etc. Kune nhamba huru yemirairo, tinokurudzira 30% deposit, pre-shipping balance.
Mubvunzo: tinogona kudhinda ne logo yedu?
RE: Hongu, OEM / ODM logo kana kurongedza hakuna dambudziko,ingotipa dhizaini yako, isu tichakuitira sampuli iwe simbisa munguva pfupi.
Mubvunzo: Zvakadini newaranti
RE: Tine QC timu, tisati tatumira isu tichatarisa mhando uye toiedza.zvigadzirwa zvedu zvese zvine CE FCC ROSH mvumo yechitupa.Warranty: 1 Gore.
Mubvunzo: Pamusoro pemari yekutumira
RE: Patinotarisa mutengo wekutumira, isu tichasarudza yakachipa uye yakachengeteka courier
Zvakapfuura: 20w inokurumidza kuchaja inotakurika simba adapta yephone
Zvinotevera: USB-C docking station socket ine wireless charger